Hambisa ku Holm? | Holmbygden.se
Ukuqwalasela wena okanye usapho lwakho ukuya i emaphandleni yokuchitha? Welcome!
Nceda uqhagamshelane nathi imibuzo kunye nenkxalabo. Mhlawumbi ufuna ukuthetha kusapho kunye nabantwana malunga nokuba yintoni na ukuba abantwana bakhule phezulu apha. Mhlawumbi kufuneka kwiindawo zoshishino naluphi na uhlobo? usizo ukuba!
Akacingi ngawe / kuwe ukuhamba uye imisebenzi Sundsvall ezingqongileyo? Kukho iibhasi ukuba beya edolophini. Ngaba ubuya ukuqhuba imoto, kusenokuba kubalulekile ukukhumbula ukuba iindleko lokuhamba zincitshiswe iindleko lwezindlu Akubizi kakhulu kwaye kuthatha kuphela 35 min embilinini Stan.
Funda ngaphezulu malunga emsebenzini kunye nebhasi iinketho apha.
Sixelele ukuba ufuna into indawo ekhethekileyo. Ngamanye amaxesha kusenokuba iindawo ezininzi kwaoko nabo ukuba akukho ziyaposwa kwi-website ngenxa yaso nasiphi na isizathu. Ukuba ngaba impendulo umbuzo wakho ngqo, siya kukunceda ufumanise. Indlela elula ukubhala okanye ukusibiza, ukubona iinkcukacha zethu zoqhagamshelwano apha.
Ingaba ufuna ukubuza umbuzo jikelele ngakumbi evulekileyo, unako kwakhona bhala apha ngezantsi ifildi izimvo.
Funda Stockholm The bafumana ayo abahlali part-time "House of Iingelosi" ku Holm.
Ingaba ufuna ukufumana i-imeyile kunye / okanye SMS xa ad entsha ngeposi yokuhlala?
Bhala iinkcukacha zakho apha ngezantsi, njengoko awunqweneli ukuba kuqhagamshelwane nawe.
inombolo yefoni (ufake enye okanye ngaphezulu):
Umyalezo kunokwenzeka, Nceda uchaze iminqweno yakho:
Buyela Indawo Listings